प्रकाशित: २०७६ वैशाख ३० , ०९:१८ बजे
महेन्द्रनगर, ३० बैशाख । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पार्कीङ शुल्कका नाममा अवैध असुली गरिरहेका कथित व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । विगत डेढ वर्षदेखि गड्डाचौकी नाकामा बसेर कानुनविपरीत पार्किङ शुल्क असुलीरहेको ठेकेदार लिलाधर भट्टका छोरासहितलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर अवैध असुलीको मुद्दामा म्याद थपेर अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाबाट भारतीय सवारी साधनको पार्किङ शुल्कको ठेक्का लिएका भट्टले गड्डाचौकी नामामैं बसेर नेपाल प्रवेश गर्ने जुनसुकै सवारीसाधनबाट रकम असुल्दै आएका थिए । उनको यो गैरकानुनी हर्कत कैयौं पटक समाचारको विषय बने पनि भीमदत्त नगरपालिकाले वास्ता गरेको थिएन । नगरपालिकाले वेवास्ता गर्दा ठेकेदार र मेयर सुरेन्द्र विष्टको मिलेमतोको आशंका गरिएको थियो ।
ठेकेदार भट्टले भीमदत्त भारतीय सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्नेवित्तिकै पार्किङ शुल्क असुल्ने गरिरहेका थिए । नेपाल प्रवेश गर्ने सवारीसाधन जुनसुकै गन्तब्यका लागि आएका भए पनि उनले रकम असुल्ने गरिरहेका थिए । नगरपालिकासँगको सम्झौतामा भने राजमार्गबाहेक नगरपालिकाको क्षेत्रमा पार्किङ गरिरहेका भारतीय सवारीसाधनबाट मात्रै शुल्क असुल्ने प्रावधान छ ।
यसबीच ठेकेदार भट्टको अवैध असुलीबारे सञ्चारमाध्यमले पटक–पटक समाचार दिए पनि नगरपालिकाले समेत कुनै चासो दिएको थिएन । तर, कञ्चनपुर प्रहरीले ढिलै भए पनि सो अवैध असुली नियन्त्रणका लागि पहल थालेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी ज्ञान बहादुर विष्टले ठेकेदार भट्टले अवैघ असुली गरेको गुनासो आएपछि भीमदत्त नगरपालिका ११ का पवनराज भट्ट र भीनपा १० का तारादत्त भट्ट रहेका छन् । उनीहरुले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सावरी साधनबाट पार्कीङ शुल्क लिदैँ आएका थिए । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट अवैध असुलीको ठेली समेत बरामद गरेको जनाएको छ ।
गरै कानुनी तरिकाबाट भीमदत्त नगरपालिकाका नाममा पार्किङ शुल्क असुल्ने उनीहरुमाथि मुलुकी अपराधसंहिताको परिच्छेद २१ को दफा २५३ अनुसार मुद्दा चलाइने डिएसपी विष्टको भनाई छ । आईतबार पक्राउ परेका दुबेजनालाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अवैध रोयल्टी उत्खनन् गर्ने ट्रिपर नियन्त्रणमा
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले खोलानालाबाट अवैध रुपमा बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्ने तीन ट्रिपरलाई नियन्त्रण लिएको छ । आईतबार वेदकोट नगरपालिका स्थित बगुनखोलाबाट अवैध रुपमा बालुवा गिट्टी उत्खनन् गरिरहेका ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिएको डिएसपी ज्ञान बहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार से.१.क. ५११, ५१२ र म.१.क. ३२८ नम्बरका टिप्पर बालुवा गिट्टीसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
साथै अवैध उत्खनन् गर्ने ट्रिप्पर र व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कारवाहीको माग सहित प्रहरीले वेदकोट नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । नगरपालिकाका कार्यक्षेत्र अन्र्तगत गैरकानुनी रुपमा रोयल्टी उत्खनन् भएकोले नगरपालिकाकालाई आवश्यक कारवाहीका लागि पत्राचार गरिएको डिएसपी विष्टको भनाई छ ।